कपाल झरेर हैरान हुनुहुन्छ ? यसो किन नगर्ने – « News24 : Premium News Channel
काठमाडौं, हल्काफुल्का कपाल झर्नु ठूलो समस्या होइन । आयु पूरा भएका कपाल झर्नु र नया पलाउनु प्राकृतिक प्रक्रिया नै हो । तर, हातले कपाल समातेर तान्दा औालाका बीच भागमा गुजुल्टै आउनु, राति सुतेर भोलिपल्ट बिहान हेर्दा शिरानीभर कपाल झर्नु सामान्य प्रक्रिया होइन । यसको बेलैमा उपचार गर्नु जरुरि हुन्छ जसलाई यहाँ बताइएको छ –
२. कपाल झर्ने विभिन्न कारण हुन सक्छन् । शरीरमा लागेको रोग, खानपिनलगायतले कपालमा असर गरेको हो भने नयाँ उपचार प्रक्रियामा जानुपर्छ । यसका लागि सबैभन्दा पहिले त कपाल झर्नुको कारण पत्ता लगाउनु जरुरी हुन्छ । अन्य रोगका कारण कपालमा असर परेको हो भने पहिले रोगकै उपचार गर्नुपर्छ ।
३. शुद्ध तोरीको तेलमा नरिवलको तेल मिलाएर मन तातो बनाउने र नुहाउने अघिल्लो रात पुरै जरा जरा सम्म औंलाको सहयेताले मसाज गर्ने गरेमा धेरै हद सम्म कपाल झर्ने समस्याबाट बच्न सकिन्छ ।